नेपाल आज | ओलीले आफनो पक्षमा वकालत गर्ने गतिलो मान्छे पनि पाएनन्, यस्तो छ नालिवेली
नेकपा एमालेकी केन्द्रिय सदस्य दिलु पन्तले ‘गुट चलाएको र पार्टी अध्यक्ष भएर पनि समानान्तर कमिटी वनाएको’ आरोपमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्नु पर्ने वताएकी छिन् । नेपाल आजसँगको विशेष कुराकानीका क्रममा नेतृ पन्तले पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई पार्टी जस्तो नवनाएको, पार्टी जस्तो नचलाएको र सवै विधि र पद्धती मिचेर अघि वढेको आरोप लगाईन।
‘समानान्तर कमिटी हामीले भन्दा पहिला वहाँले नै वनाउनु भएको हो । पार्टी अध्यक्षले नै मदन भण्डारी फाउण्डेसन मार्फत गुट भेला गर्ने, समानान्तर कमिटी चलाउने, समानान्तर पार्टी चलाउने काम गर्नु भएको हो’ उनले भनिन्–‘त्यसैले कर्वाही त वहाँलाई नै गर्नु पर्ने हो । पार्टीको अध्यक्षले पार्टी चलाउने की गुट चलाउने ? छुट्टै संस्था चलाउने की पार्टी चलाउने ? छलफल पार्टीभित्र गर्ने की अन्त कहीँ गएर गर्ने ।’
ओलीले अन्तवाट निर्देशीत भएर पार्टीको वैठक नै नराख्ने र आफुखुसी गर्न थालेपछि कुरा राख्ने र छलफल गर्ने ठाउँनै नपाएको उनको भनाई छ । ‘पार्टी भित्रको छलफललाई निशेध गरेपछि पार्टीका केन्द्रिय सदस्यहरु, पादाधिकारीमहरुले निश्चय पनि कुरा त उठाउँछन नी त। वैठक नै नराखेपछि कहाँ गएर कुरा गर्ने ? त्यसपछि हामीले विधिसँग पार्टी चलाउनोस भन्यौ। पार्टी भनेको त वृहत संख्या भित्र हुन्छनी त, ब्यक्ति मात्र होईन’ उनले भनिन्–‘हामीले कमिटी प्रणाली स्थापित गर्नोस भन्दा वहाँले त्यसलाई नजर आन्दाज गर्नु भयो, त्यसपछि विमती सुरु भएको हो ।’
‘समानान्तर भेला आयोजना गर्नुभको छ, पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा विभिन्न लान्छना लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुलाई कारवाही नगरेर के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले पटक पटक वैठक वोलाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि अर्कोवाटो रोज्नु परेको वताईन । ‘अध्यक्षलाई वैठक वोलाउनका लागि हस्ताक्षर क्याम्पियन गरेनौ की, वैठक वोलाई दिनोस भनेर निवेदन हालेनौ की ? नगरेको केही पनि छैन । महाधिवेसन भएको ६ वर्षभन्दा वढि भयो। यो विचमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग वहाँले एकताको प्रस्ताव ल्याउँनु भयो। त्यो वेला पनि हाम्रो पार्टीमा थुप्रै विवादहरु थिए । समस्याहरु थिए। त्यसलाई समाधान नगरीकन अर्को पार्टीसँग एकता को प्रस्ताव आयो’ उनले भनिन्–‘राष्ट्रिय हित र पार्टीको वृहत्तर हित हुन्छ भनेर त्यसलाई पनि हामीले सहर्ष स्विकार्यौ। वृहत कम्युनिष्ट एकताको निम्ति माओवादीसँग गरेको एकतालाई स्विकार गरियो। त्यसपछि पनि वहाँले एकल निर्णय गर्न छोड्न भएन।’
ओलीले आफु प्रधानमन्त्री वन्न र आफनो गुटका मान्छेलाई विभिन्न नियुक्ति दिलाउनका लागि पार्टी एकता गरिएको उनले तर्क गरिन। ‘पार्टी एकता गर्नुको मुख्य कारण के भने ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री वन्न र आफना मान्छेहरुलाई नियुक्ति दिनका लागि मात्रै देखियो। पार्टीको गुटलाई अझ संस्थागत गर्दै आफनो मात्र वनाउनका लागि वहाँले माओवादीसँग एकता गर्नु भयो । र साढे दुई–साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने, पार्टीमा दुई अध्यक्षको वरावर हैसियत राख्ने कुरा चै हामीलाई दुई वर्ष पछि थाहा भयो’ पन्तले थपिन–‘यस विचमा प्रचण्डले पनि अव मेरो पालो आउने वेला भयो भनेर जिकिर गर्न थाल्नु भयो। आफनो हक स्थापित गर्न खोज्नु भयो। त्यसपछि वहाँले माओवादीसँगको सम्वन्ध पनि विगार्दै एमाले भन्न थाल्नु भयो । नेकपा हुँदा हँुदै पनि मदन भण्डारी फाउण्डेसन मार्फत वैठक÷भेला गर्ने, समानात्तर कमिटी चलाउने गर्नु भयो। अर्थात भईखाएको दुईतिहाईको सरकार थियो हाम्रो, वहाँले संविधानमै नभएको कुरा ल्याएर संसद विघटन गर्दिनु भयो ।’
‘त्यसमा हामीले आन्दोल गर्यो र सर्वोच्चमा वहसहरु भईरहेका थिए । वहाँले वहस गर्ने मान्छे समेत गतिला पाउनु भएन। कसैले आफैलाई जन्माएको आमाको हत्या गर्छ भने त्यसको पक्षमा वोल्ने त कमै हुन्छ होला नी त । यो त उदाहरण नै भयो’ उनले भनिन्–‘उनको पक्षमा वहस गर्ने वकिलहरु चै पुर्व राप्रपाको खेमामा रहेका मान्छेहरु थिए। जो गणतन्त्रमा विश्वास गर्छन, ति प्रगतिशिल पक्षका त कसैले गरेनन् । कांग्रेसले पनि साथ दिन सकेन।’
संसद पुनःस्थापना भईसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा नदिएकोमा उनले आस्चर्य ब्यक्त गरिन। ‘संसद पुनःस्थापना भयो, फेरी वहाँकै हकदावी, संसद÷पार्टी भित्र फेरी पनि मै हो भनेर वस्नु भयो एउटा प्रधानमन्त्रीले आफैले विघटन गरेको संसद सर्वोच्नले पुनस्थापित गर्यो। अनि अलिकती नैतिकताको पाठ पढेको छ भनेर देखाउनु पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
‘अदालतले नै तपाईहरुको पार्टी फुटाई पनि दियो नी त ?’ भन्ने जिज्ञासामा अदालत र संसद पुनःस्थापना फरक कुरा भएको उनले वताईन । ‘वहाँले संसद विघटन गरेर संविधान नै सिद्याउन खोज्नु भएको थियो । त्यो पुरा नभएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल नाम गरेका मान्छेले पार्टीको नाम जुध्यो भन्दै अदालतमा जानु भयो। वहाँले नाम मात्रै जुझेको भन्नु भएको थियो तर निवेदकले नै दावी नगरको र अरु कसैले पनि दावी नगरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतवाट आयो’ उनले भनिन्–‘पार्टीहरुको एक हुने, पार्टी संगठित हुने अथवा नयाँ पार्टी दर्ता हुने हक माथि नै एक खालको हस्तक्षेपकारी भुमिका प्रदर्शन गरेर अदालतले क्षेत्राधिकार नाघ्यो। जुन निर्णय हामीले मान्नु पर्यो। तर, जव हकदावी नभएको विषयमा क्षेत्राधिकार भन्दा वहिर गएर सर्वोच्च अदालतवाट फैसला आउने कुरा छ नी। यसमा त पक्कै पनि केहि कुरा छ त । सेटिङ्ग छ भन्ने हामीलाई थाहा भईसक्यो। तर पनि अदालतलाई त मान्नु पर्यो ।’
गुन्जायस नै नभएको क्षेत्रमा जाने वित्तिकै त्यहाँ सेटिङ्ग थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको दावी गरेकी पन्तले सेटिङ्ग मार्फत के गर्न खोजेको हो र कसले गर्न खोजको भन्ने विषय छ खोजी गर्ने काम भईरहेको वताईन । ‘निष्कर्ष चै के हो भने सेटिङ्ग थियो, तर कहाँवाट भयो भन्ने कुरा छलफलको विषय छ। तर, त्यस विषयमा पुनरावलोकनका लागि जानु पर्छ’– उनले भनिन्।
अदालतले पार्टी नफुटाएको दावी गरेकी उनले एमाले र माओवादीलाई अलग अलग पारेको जिकिर गरिन। ‘पार्टी फुटाएको होईन। नेकपालाई अलग–अलग पार्यो। एमाले र माओवादीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्याई दिएको थियो । त्यसपछि त्यहि संरचनामा वसेर वैठक वसेर अव के गर्ने त भनेर जानु पर्ने थियो। तर, त्यता तिर नगएर नयाँ ढंगवाट अध्यक्ष चलेपछि समस्या आयो। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले स्विकार गर्नु त हाम्रो वाध्यता हो। हामी माओवादीमा गएका होईनौ, हामी एमाले नै हो । जुन नेकपा एमाले र माओवादीलाई नेकपा वनाउने काम भायो, त्यो सिङ्गो एमाले पनि होईन, सिङ्गो माआवादी पनि थिएन। त्यो साझा पार्टी थियो । सर्वोच्च आलतको फागुन २३ गतेको वैठकले अलग वनाई दियो । त्यो दिनसम्म ओली र माधव नेपाल दुवै एमाले होईनन् । सर्वोच्च अदालतको एउटै निर्णयले एकै छिनमा एमाले भएका हौ’ उनले भनिन्–‘त्यसैले यसलाई को एमाले को उताको भन्ने कुरा पनि भएन । अर्को कुरा दुई तिहाई भएको सरकार हुँदा हुँदै संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा त पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ नी त। आफनैले वनाएको संविधान माथि लात्तिले हान्ने काम हुन्छ भने त्यसमा त हामीले वोल्नु पर्छ नी त। आफनै संसद विघटन गर्ने जो सुकै होस कारवाहीको भागि हुन्छ।’
अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाल लगायतका नेतालाई कारवाही गर्नु भयो अवको योजना के छ ? भन्ने प्रश्नमा नेतृ पन्तले त्यो कारवाहीको अर्थ नहुने वताईन । ‘ओलीको कारिवाहीको अर्थ छैन। फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसला पछि ०७५ जेठ दुई गतेकै अवस्थामा पार्टीको वैठक वस्नु पथ्र्यो । वैठकले के गर्ने, कसरी जाने भनेर छलफल गर्नु अगावै ओलीले फागुन २८ गते आफु पक्ष वैठक राखेर महाधिवेसनवाट चयन भएका पदाधिकारीलाई खारेज गर्नुभो, पार्टी कमिटीलाई भंग गरेर आयोजक कमिटी वनाउनु भयो। त्यसपछि वहाँलाई हामीले अध्यक्ष मान्ने अवस्थामा छैनौै’ उनले भनिन्–‘त्यहि महाधिवेसनवाट निर्वाचित भएका उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, पदाधिकारी, केन्द्रिय कमिटि, पोलिटब्युरो छ। वहाँको चै पद राखेर अरुको पद चै भंग गर्ने कुरा हुन्छ ? एमालेको विधानको धारा १४ अनुसार पदाधिकारीको चयन महाधिवेशनले मात्रै गर्छ। धारा १३क अनुसार विधान संसोधन महाधिवेशन र विधान सम्मेलनले मात्रै गर्न सक्छ। यति प्रस्ट भन्दाभन्दै पनि महाधिवेशन गर्नका लागि पनि आयोजक कमिटी वनाउने कुरा हुन्छ र ?’
अवका दिनमा ओलीको गैर जिम्मेवार कदमको विरोध गर्ने, ओलीका समानन्तर गतिविधि रोक्न कमिटीलाई दुरुस्त वनाउने, गुटका कारणले पछाडि परेकालाई खवरदारी गर्ने र कम्युनिष्ट पार्टीलाई विखण्डन गर्ने सोचको खण्डन गर्दै आम जनतामा जाने उनले वताईन।
अनि नेतृत्व कब्जा गरेर प्रचण्डलाई वुझाउने भन्ने जिज्ञासामा उनले पार्टीले नेतृत्व कब्जा गर्ने वताईन । ‘वहाँले चै गुटले कब्जा गर्नु भया, हामी चै पार्टीले नेतृत्व कब्जा गर्छौ’ उनले भनिन्–‘प्रचण्डलाई किन वुझाउने, हाम्रो पार्टी हामीसँग हुन्छ। हामी खेताला हो र वहाँको ? ओली त गैर जिम्मेवार तरिकालने नै वोल्नु हुन्छ र आरोप लगाउनु हुन्छ।’
माधवकुमार नेपालले गरेको भेला प्रचण्डले दिएको होमवर्क हो भन्ने सुनिन्छ के हो भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो सरासर गलत भएको वताईन। ‘होमवर्क प्रचण्डले दिनै पर्दैन। माधव नेपाल झलनाथ खनालहरु हाम्रो पार्टीको सिङ्गै स्थायी कमिटि छ नी। यत्रो देशभरीका कार्यकर्ता छन् नी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउने र एमाले वनाउने तागत राख्नेलाई कसैले होमवर्क दिनुपर्दैन। हामीसँग प्रसस्त होमवर्क गर्न सक्ने तागत छ। देशलाई मागनिर्देश गर्न सक्ने सिद्धान्त छ। र पार्टी मात्र होईन जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै पार्टी भित्रको लोकतान्त्रीक पद्धतिलाई अगाडि वढाउनका निम्ति रक्षा गर्ने तागत पनि हामीसँग छ’– उनले भनिन्।
ओलीको गैरजिम्मेवार काम भारतको इसारामा
एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को इसारामा गैरजिम्मेवार काम गरेको पन्तको आरोप छ। ‘यो थाहा त भएको छ । विभिन्न वैदेशिक शक्तिका मान्छेहरु वालुटारमा रातारात हेलीकप्टर नै लिएर आएको तपाई लाई थाहा छ। यो चै जनतालाई नै थाहा छ। हामीेले भन्नै पर्दैन। वुझनु हुन्छ यति भन्दा। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। राजावादीसँग वहाँको सहयात्रा कति निकट छ ? वहाँले झापामा चुनाव जित्नका लागि राप्रपाको राजेन्द्र लिङदेनसँग सहयात्रा गर्नु भयो। वुझनु हुन्छ नी त्यहाँवाट। वहाँ प्रतिगमनको पक्षमा हुनुहुन्छ। कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रीक आन्दोलन, गणतान्त्रीक आन्दोलको सफलताको पक्षमै हुनुहुन्न। वयलगाडि चढेर अमेरीका पुगिदैन भनेर आन्दोलनको दौरानमा भन्नु भएको होईन र’ उनले थपिन–‘हामीले त्यतिखेर पनि खवरदारी गरेका थियौ। नेपालमा सवैभन्दा पहिला गणतन्त्रको माग गर्ने हामी हौं। त्यति वेला पोखरामा हाम्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भईरहेको थियो । त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सवैभन्दा पहिला गणतन्त्र माग गर्ने हामी हो । हामीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कमरेडहरु अहिले गणतन्त्र नेपालको जिम्मेवार ठाउँमा वसेर दाई गरिरहनु भएको छ ।’
ओलीले अहिले त्यसैलाई वुझन नसकेको पन्तको भनाई छ । ‘त्यो आन्दोलनमा वहाँको भुमिका भएन त्यस कारण कसरी जाने भन्नेनै थाहा भएन। अनि कुहिरोका काग जस्तो जसो मन लाग्यो उसै गर्न थाल्नु भयो । प्रतिगमनकारी को हुन, अग्रगमनकारी को हुन, सहयात्री को हुन, हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा भाग लिएका को हुन, प्रतिकार समितिमा वसेका को हुन वहाँलाई के थाहा, जे मन लाग्यो त्यहि छ’ उनले भनिन्।
नेकपा एमालेकी केन्द्रिय सदस्य दिलु पन्तसँग नेपाल आजका लागि प्रस्तोता माधव गुरागाईँले गरेको विस्तृत कुराकानी हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नु होला।